Raga ragga fuula oo waji-gabax kala kulmay dalka Australia | HimiloNetwork
Raga ragga fuula oo waji-gabax kala kulmay dalka Australia
Posted by: Zakariya in Wararka January 22, 2016	0 342 Views
Muqdisho (Himilonews) – Nin ayaa la mooral-jabay diidis uu kala kulmay dowladda Australia oo ku aadaneyd inuu aaska u sameysto nin ay is-qabeen oo ku geeriyooday xilli ay socotay xafladdii arooskooda.
Marco Bulmer-Rizzi, oo kasoo jeeda London, Ingiriiska, wuxuu la niyad-jabay markii seygiisa David Bulmer-Rizzi, oo 32-jir ah uu ku geeriyooday Adelaide xilli ay ku jireen bisha malabka.
David ayaa dhintay sabtidii hore xilli ay ku jireen bishooda malabka. Wuxuu kasoo suldaarmay jaranjarta isaga oo ka jabay kalxamaha. Waxaa loola cararay isbitaalka balse wedka ayaa ku yimid.
Jeer uu abaabulayey aaska ninkii ay is-qabeen, Marco waxaa lagu war-geliyay inuusan isku diiwaan-galin karin xeer guureedka jinsiga is leh–ee ah nin nin fuula, maadaama aan laga aqoonsaneyn sharcigaas gudaha dalka Australia.
Saraakiisha ayaa ku war-geliyay Marco inuusan ku diiwaan-galin guur-rageed balse uu ku qori karo shahaadada dhimasho ee ninkay is-qabeen “Waligii ma guursan”
Dad badan oo ku nool gudaha Australia ayaa tallaabadan ku dhiirri-geliyay dowladda inay xeerkaas xejiso.
Sharciga nin-nin fuula ayaa laga jideeyey meelo badan oo reer Galbeed iyo bariba ah. Balse kol dhow ayay aheyd markii Afrika laga dhaadhiciyey hirgalinta xeerkaas. Waxaase lagala horyimid diidmo iyo canbaareyn.
Madaxweynaha Uganda ayaa barlamaankiisa u sheegay inay iyaga is guursadaan hadday doonayaan inay dhaqan-gal uga dhigaan dadka Uganda. Waana markaas kolkay timid inaan la qaadan xeerkaas foosha xun–u eegis la’aan caqiido diimeed balse fidrada Insaanimo.
Halka madaxweynaha Zimbabwe uu cod dheer ku canbaareeyey aragtidaas foosha xun ee lala damacsanaa qaaradda Afrika. Dalalka dhaca koofurta Afrika oo badi heysta diinta Kirishtaanka ayaanay u cuntameyn qaadashada aragtida nin-nin fuula.
Previous: Wiil 7-jir ah oo guursaday Eey
Next: Waxyaalaha kugu qabsi kara inaad Mustaqbalka booqato Dubai